I-OEM - Weihai Ruiyang Boats Development Co., Ltd.
Ibhodi le-Inflatable Paddle
Inani Lokukhiphayo Lonyaka
I-Ruiyang inamafekthri amagatsha amabili, ama-workshops amane, indawo ephelele engamamitha-skwele ayi-15,000, futhi ifakwe umugqa wokukhiqiza wokuphrinta, umugqa wokukhiqiza we-EVA kanye nomugqa wokukhiqiza izesekeli. Umthamo wethu wanyanga zonke wesikebhe esiphefumulayo izingcezu eziyi-1000, futhi izingcezu ezingu-12,000 zebhodi lokusefa eliphefumulayo.
U-Ruiyang uzibophezele ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwezikebhe eziphefumulayo, ama-surfboard aphephethekayo neminye imikhiqizo iminyaka ecishe ibe ngu-20, ehlinzeka ngezinsizakalo zobungcweti kumakhulu ezinkampani namakhasimende emhlabeni jikelele, okuhlanganisa i-TAKACAT, VETUS, SARAY, CRAKEN neminye imishini yasemanzini eyaziwayo. brand. Ngokwezidingo zakho eziqondile ze-OEM noma i-ODM, abaklami bethu abanolwazi abangaphezu kweshumi bazokwenzela imikhiqizo encintisana kakhulu kuwe!
Kumasampuli, isikhathi sokuhola cishe yizinsuku eziyi-7. Ngokukhiqizwa okukhulu, isikhathi sokuhola siyizinsuku ezingama-30-45 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozithi. Ngemuva kokuthi isivumelwano sesixoxiwe futhi sasayinwa, sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma isikhathi sethu sokuhola singasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela uxoxisane ngezimfuneko zakho nommeli wethu wezentengiso. Kuzo zonke izimo sizozama ukwanelisa izidingo zakho futhi ezikhathini eziningi senze njalo.
I-Ruiyang inochungechunge oluphelele olusekela ukukhiqiza, okusenza sibe nenzuzo eyengeziwe ngokwentengo. Izintengo zethu zingase zishintshe kuye ngokuhlinzeka nezinye izici zemakethe. Uzothola uhlu lwethu lwakamuva lwamanani uma usifinyelela ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Ngemva Kwesevisi Yokuthengisa
Umkhiqizo ngamunye okhiqizwe uRuiyang uhlolwa ngokuqinile izinto ezingavuthiwe, ukulawulwa kokukhiqiza nokuhlolwa komkhiqizo oqediwe. Imikhiqizo eyinhloko ithole i-CE, i-TÜV nezinye izitifiketi.Sithembisa ngokuqinile ukuthi yonke imikhiqizo iqinisekisiwe iminyaka engu-2, futhi sisekela insizakalo yokuthengisa ngemva kwesikhathi sewaranti ukuxazulula izinkathazo zakho!
Isevisi yenhliziyo yonke ngemva kokuthengisa
Ake ningabi nazinkathazo!
Imikhiqizo Eshisayo- Imephu yesayithi- I-AMP Mobile
I-Personal Industry Zone, i-Liulin, i-WeiHai, i-China.